Brexit: Wareegga xiga ee wadahadalka ayaa dib loo dhigay todobaad. ‘Si loo wada tashado.’ | Awdalpress.com
Brexit: Wareegga xiga ee wadahadalka ayaa dib loo dhigay todobaad. ‘Si loo wada tashado.’
Waxa Daabacay staff-reporter on Sep 12th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Wareegga xiga ee Wadahadalka Brexit ayaa dib loo dhigay toddobaad si loogu ogolaado “waqti dheeri ah oo la-tashiyo la siiyo “.
Awdalpress – London – Wareegga afraad ee wada xaajoodka UK-EU, oo bilaabi lahaa 18-kii Sebtembar, ayaa la billaabi doonaa 25ka.
Xukuumaddu waxa ay sheegtay in dib loo yara dhigi doono “Si fursad loo siiyo gorgortamayaasha oo ay ugu dabacsamaato horumarinta hawshu”.
Waxaa jiray warar sheegaya in laga yaabo inay u ballaysimaan gogosha loo diyaarinayo qudbadda ra’iisul Wasaare Theresa May ee ku saabsan arrimaha Yurub.
“Guddiga UK iyo Komishanka Midowga Yurub ayaa maanta si wadajir ah u ansixiyay in ay billaabaan wareegga afaraad ee wada xaajoodka oo qabsoomi doona 25-ka September,” ayaa lagu sheegay hadal ka soo baxay Midowga Yurub.
“Labada dhinacba waxa ay isku afgarteen taariikhdan, kadib markii wadahadal dhexmaray saraakiisha sare ee loo qoondeeyey in waqti dheeraad ah oo wadatashi ay siin doonaan gorgortamayaasha si ay u horumariyaan kulanka September.
” Madaxa wada xaajoodka EU-da, Michel Barnier, ayaa ku nuux nuuxsaday baahida loo qabo in dabacsanaan, iyada oo haddana laga digay “saacadda is garaacaysa” haddii heshiis lagu gaadho wakhtigii ay UK qorshaysatay inay ka baxdo EU oo ku beegan dhammaadka March 2019.
Wadahadalladii u dhexeeyay labada dhinac ee bishii la soo dhaafay, waxa hoggaaminayay xoghayaha Brexit-ka David Davis.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in aanay istiraatiijiyadeeda Brexit isbeddelin, iyada oo xataa doorashadeeda dib loo dhigay.
Boqortooyada Ingiriisku waxa ay dooneysaa in ay xoojiso xawliga iyo wadahadal furan oo ku saabsan xidhiidhka mustaqbalka ee UK ee Midowga Yurub, oo ay ku jirto ganacsiga, sida ugu dhakhsaha badan. Waqtigan xaadirka ah, diiraddu waxa ay saaran tahay arimaha asaasiga ah, oo ay ku jiraan xuquuqda muwaadiniinta EU-da ee UK iyo Ingiriiska oo ku tartamaya qaaradda, mustaqbalka xuduudaha Irishka, iyo arrimaha dhaqaalaha.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra’iisal wasaaraha ayaa lagu sheegay in todobaadkan la qaban doono wadahadal loogu talagalay dhacdo ka dhacday UK oo ah “taariikhda siyaasadeed ee gudaha”. Mrs May ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay 21-ka September si weyn uga hadasho Brexit.
Wadahadalkan ayaa lagu magacaabay Lancaster House 2.0, oo ay warbaahintu ka soo xigatay hadalka ay ka soo saartay London bishii Jenaweri, oo si weyn loo tixgeliyey waqtiga qorshaha budhcad-badeed ee xukuumadda, taasoo xaqiijisay in UK ay doonayso in ay ka baxdo suuqyada halbeegga ah iyo midda dhaqaalaha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku guuldareystay in ay aqlabiyad badan ka qaadato doorashadii bishii Jun ee sannadkii hore, taasi oo keentay in ay ka dhigto dhibaatada ugu weyn ee suurtagalka ah ee ka dhalatay kacdoonnada suurtagalka ah ee ku aaddan sharciyada muhiimka ah ee Brexit ee Golaha Shacabka.
Ms May, ayaa ku adkaysatay istiraatiijiyadeeda Brexit in ay tahay mid aan isbedelayn, waxayna rabtaa inay sii joogto hoggaaminta “muddada dheer”, waa inay ka hadashaa shirweynaha xisbiga Jamhuriga ee bilawga bisha Oktoobar.
Awdalpress kala soco arrimaha ka bixitaanka Ingiriiska ee Yurub.
Waxa diyaariyey Ahmedweli Goth, xogaha waxa aan ka hellay BBC
This post has been viewed 10626 times.